ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်လူငယ်များနှင့်သက်ရောက်မှုတွေအကြားစအို heterosex: ဗြိတိန် (2014) တွင်တစ်ဦးအရည်အသွေးလေ့လာမှု - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
BMJ Open ။ 2014 ဇူလိုင် 18;4(8): e004996 ။ Doi: 10.1136 / bmjopen-2014-004996 ။
Marston ကို C, Lewis က R ကို.
တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အုပ်စုတစ်စုအင်တာဗျူးများသုံးပြီးအရည်အသွေး, longitudinal လေ့လာမှု။
1မတူကွဲပြားသောလူမှုရေးနောက်ခံကနေ 30-16 အသက် 18 ယောက်ျားမိန်းမတို့။
အင်္ဂလန်မှာ3ခြားနားက်ဘ်ဆိုက်များ (လန်ဒန်, တစ်မြောက်ပိုင်းစက်မှုမြို့, ကျေးလက်အနောက်တောင်ဘက်) ။
Anal heterosex သည်မကြာခဏအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်နာကျင်မှု၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက် 'ရှင်းပြချက်' ဟုမကြာခဏကိုးကားပြောဆိုကြသော်လည်းသူတို့၏မှတ်တမ်းများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများရရှိခြင်းသည်ဒြပ်စင်တစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည် အခြားအဓိကဒြပ်စင်လူတို့၏စပ်ကြားယှဉ်ပြိုင်ပါဝင်သည်; 'လူတွေကဒါကိုလုပ်ရင်အဲဒါကိုသဘောကျရမယ်' ဆိုသည့်စွပ်စွဲချက် (အမျိုးသမီးများအတွက်နာကျင်မှုဖြစ်မည်ဟုဆန့်ကျင်သောထင်မြင်ချက်နှင့်အတူ) နှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာအကျပ်ကိုင်မှုနှင့် 'မတော်တဆ' ထိုးဖောက်မှုပုံမှန်ဖြစ်ခြင်း။ အမျိုးသားများသည်တွန့်ဆုတ်နေသောမိတ်ဖက်များကိုဆွဲဆောင်စည်းရုံးရန်မျှော်လင့်ထားပုံရသည်။
လူငယ်များ၏အဖြစ်အပျက်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ဒီလေ့လာမှုက, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နဲ့သဘောတူညီခကျြနဲ့ပတျသကျတဲ့ဆှေးနှေးမှုအားပေးကူညီရန်အန္တရာယ်များနှင့်နာကျင်နည်းစနစ်လျှော့ချရန်နှင့်အကျပ်ကိုင်ပုံမှန်ကြောင်းအမြင်များကိုစိန်ခေါ်ဖို့စအိုလိင်ဆက်ဆံပစ်မှတ်ထားအန္တရာယ်လျှော့ချရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
စအိုလိင်ဆက်ဆံ; အရည်အသွေးဆိုင်ရာသုတေသန; လိင်ကျန်းမာရေး, Young ကအရွယ်ရောက်သူ
ဒီလေ့လာမှုကအင်္ဂလန်မှာသုံးကွဲပြားခြားနားက်ဘ်ဆိုက်များကနေကြီးမားတဲ့အရည်အသွေးနမူနာကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တစ်ဝှမ်းအခွအေနနဲ့ 16 နှင့် 18 ၏အသက်အရွယ်အကြားအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားစအိုလိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင်ဘို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ကိုဖမ်းယူဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာမှုအရလူငယ်များစအိုနှင့်ပတ်သက်သောဇာတ်ကြောင်းများတွင်အတင်းအဓမ္မ၊ နာကျင်မှုနှင့်မလုံခြုံသောစအိုလိင်ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသည့်အတွေးများပါ ၀ င်သည်။ ဤအကြံဥာဏ်များကိုကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
စအိုလိင်ဆက်ဆံလူငယ်များအကြားပိုမိုပျံ့နှံ့ဖြစ်ပါသည်, အများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအများအားဖြင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်ပညာရေးမှပျက်ကွက်မီဒီယာ-သည်နှင့်များစွာသောလူမှုရေးအခင်းအကျင်းအတွက် unmentionable ပုံရသည်။ တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်-ပေမယ့်အမျိုးသမီးများကိုအမျိုးသားများနှင့်အကြားရသေးစအိုလိင်ဆက်ဆံ
စစ်တမ်းများကြောင်းလုလင်တို့နှင့်အမျိုးသမီး-နှင့်အထက်လူကြီးများ-နေကြသည်ကိုပိုမိုအစဉ်အဆက်ထက်မတိုင်မီစအိုလိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင်အကြံပြုပါသည်။1-4 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုကိုမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံလူငယ်များကရှုမြင်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်လျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုထိခိုက်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့နေကြတယ်,5-7 စအိုလိင်ဆက်ဆံထိုကဲ့သို့သောမီဒီယာများကရာထူးတိုးခံရဖို့ထင်ကို 'မြင့်သောအန္တရာယ်' 'အလေ့အကျင့်တွေထဲကဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ,8 ,9 စအိုအလေ့အကျင့်ပေါ်မှာညစ်ညမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေမယ့်သက်သေအထောက်အထားပါးလွှာသည်။5
၏ Over-18 နှစ်အရွယ်ယေဘုယျနေသောစအိုအလေ့အကျင့်၏လေ့လာမှုများ,10-12 စအိုလိင်ဆက်ဆံအမျိုးသမီးတွေထက်ပိုပြီးလုလင်တို့သည်အားဖြင့်တပ်မက်လိုချင်သောအစေခြင်းငှါနှင့်ကိုယ်ဝန်ကိုရှောင်ရှားဖို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါအကြံပြု,12 ,13 သို့မဟုတ်ရာသီကာလအတွင်းအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု,12 မကြာခဏကွန်ဒုံးနှင့်အတူအကာအကွယ်မဲ့ဖြစ်ခြင်းနေစဉ်။12-14 ဒါဟာမိန်းမတို့အဘို့နာကျင်စေခြင်းငှါ,12 ,13 ,15 နှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အလိင်တစ်ဦးပျြောမှေ့စတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်သည်။16 ,17 နီးပါးတဦးတည်းကိုငါးများတွင် 16-24 နှစ်ကြားရှိ (19 ယောက်ျား၏% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 17%) ဗြိတိန်မှာမကြာသေးခင်ကအမျိုးသားရေးစစ်တမ်းများတွင်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များတွင်စအိုလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပွီးလြှငျသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။4
အနည်းငယ်သာအသေးစိတ်န်းကျင်ခွအေနမြေားသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအောက်မှာ-18 နှစ်အရွယ်အကြားစအိုလိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင်ဘို့အကြောင်းပြချက်နှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်, သို့မဟုတ်ဤနျြးမာရေးအတှကျရှိစေခြင်းငှါအဘယျသို့ဂယက်ရိုက်။ ဒီလေ့လာမှုက 18 အသက်ငယ်ရွယ်လူတို့တွင်နှင့်နှစ်အောက်စအိုအလေ့အကျင့်မှာအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနောက်ထပ်လေ့လာမှုအဘို့ယူဆချက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အကြံပြုချက်များကိုမှန်ကန်စေသည်။
ဤနေရာတွင်တင်ပြစအို heterosex ပတ်သက်. ဇာတ်လမ်းများခြားနားသုံးခုအတွက် 18-130 အသက် 16 လူငယ်များ၏တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနမူနာအကြားကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏အကွာအဝေးနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုစူးစမ်းသော longitudinal, အရည်အသွေးရောနှောနည်းလမ်းများလေ့လာမှုများ ( 'sixteen18' 'စီမံကိန်းကို) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာ အင်္ဂလန်မှာတည်နေရာ: လန်ဒန်; တစ်ဦးအလတ်စားမြောက်ပိုင်းစက်မှုမြို့နှင့်အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျေးလက်ဒေသ။ 2010 တစ်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင်တိမ်အနက်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်း (လှိုင်းနှစ်ခု) ၏ဇွန်လ9သည်အထိပြန်လည်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း 71: ဇန်နဝါရီ 37 မှစ. , ငါတို့ 34 အုပ်စုတစ်စုအင်တာဗျူးနှင့် 43 အတိမ်အနက်ကိုအင်တာဗျူး (1 အမျိုးသမီးများနှင့် 2011 ယောက်ျားလှိုင်းတဦးတည်း) ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လန်ဒန်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး၏ကျောင်းနှင့်အပူပိုင်းဒေသဆေးပညာသုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီကလေ့လာမှုအတည်ပြုအပေါင်းတို့နှင့်သင်တန်းသားများကိုစာရေးသားခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့သည်။
တိမ်အနက်ကိုအင်တာဗျူး, ကြှနျုပျတို့လူမှုရေးနောက်ခံအပြောင်းအလဲတိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နမူနာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏တည်နေရာအတွင်းမှာပဲကျနော်တို့အပါအဝင် setting များကိုတစ်ဦးအကွာအဝေးကနေနမူနာ: ကျောင်းများ / ကောလိပ်များ; မဟုတ်ပညာရေးသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးအတွက်လူငယ်များကိုပစ်မှတ်ထားလူငယ်အလုပ်န်ဆောင်မှု; လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများ; ၎င်းတို့၏မိသားစုများအနေဖြင့်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်နေကြလူငယ်များများအတွက်ထောက်ခံအိမ်ရာစီမံကိန်း, နှင့်အလွတ်သဘောကွန်ရက်များ။ ကျနော်တို့ '' snowball '' နမူနာကိုလည်းအသုံးပြု, ကျေးလက်အနောက်တောင်ဘက်အတွက်ကျွန်တော်တစ်ဦးမြို့အလယ်ဗဟိုတွင်တိုက်ရိုက်လူတွေကိုချဉ်းကပ်။ နမူနာ (အများဆုံးပါဝင်သူဗြိတိန်ဖြူ၏) လူမျိုးစု၏စည်းကမ်းချက်များ၌စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးနောက်ခံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွဲပြားခြားနားကြီးနှင့်ဒီထက်ကွဲပြားခြားနား။ Lewis ကကွညျ့ရှု et al18 နောက်ထပ်အသေးစိတ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ information ကိုလက်ကမ်းကြော်ငြာနဲ့ကျွန်တော်ဘာပဲ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမဆိုနုပျိုလူတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့အလားအလာတွေ့ဆုံမေးမြန်းနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏စကားစမြည်အတွက်မီးမောင်းထိုးပြ။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့လှုပ်ရှားမှုများ၏အကွာအဝေး, သူတို့၏လိင်ပိုင်းမိတ်ဖက်များ၏နံပါတ်နှင့်သဘာဝတရား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွဲပြားသော်လည်း, အများစုသာဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်မိတ်ဖက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နက်ရှိုင်းသောတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများတွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူများအားသူတို့အဘယ်သို့သောလိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များ၊ ထိုအလေ့အကျင့်များ၏အခြေအနေများနှင့်၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့မည်သို့ခံစားရကြောင်းမေးမြန်းခဲ့သည်။ လူငယ်များ၏ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပေါ်ပေါက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များကိုတမင်တကာထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အုပ်စုဆွေးနွေးမှုများတှငျကြှနျုပျတို့သူတို့အလေ့အကျင့်မှသူတို့ရဲ့သဘောထားတွေ, ကြား၏နှင့်သူတို့လူငယ်များဟာသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ယေဘုယျအားဖြင့်အထူးသဖြင့်အလေ့အကျင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ, ဒါကြောင့်လျှင်အဘယ်အခြေအနေတွေအောက်မှာမယ်လို့ထင်ရှိမရှိခဲ့ကျင့်သောအရာကိုအကြောင်းကိုယေဘုယျမေးခွန်းများကိုမေး၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ဆုံမေးမြန်း၏အတော်များများက unprompted စအိုလိင်ကိစ္စအလေ့အကျင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြော (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ In-depth ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်း၏လေးပုံတပုံအကြောင်းကိုစအိုအလေ့အကျင့်၏သက်ဆိုင်ရာ, သူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံ (စအိုလိင်ကိစ္စအတွေ့အကြုံများအစီရင်ခံလျှင်ထိုသူတို့အတွက်စေ့စပ်သို့မဟုတ်မဖူးခြင်းရှိမရှိ) နှင့်ဒါလှိုင်းနှစ်ခုအတွက်ကျနော်တို့အထူး၎င်းတို့၏အမြင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းသားများအပေါငျးတို့သတောင်း) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုအကြားစအိုလိင်ကိစ္စအလေ့အကျင့်ပတျဝနျးကငျြသော့ချက်ဟောပြောချက်များကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့နဲ့တိကျတဲ့အတှေ့အကွုံအသေးစိတ်အကောင့်ထုတ်ယူဖို့ပဲ။
ကျနော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားသောအပေါင်းတို့နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းကူးရေးသော။ ကျနော်တို့ကြားမှာအကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုအသုံးပြု19 ဒေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့။ ဤသည်မှတ်တမ်း '' coding '' ပါဝင်19 နှင့်လူငယ်များ၏စအိုနှင့်ပတ်သက်သောအကောင့်များအားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများ (ဥပမာ - အဖြူ၊ လူလတ်တန်းစားအမျိုးသမီးများ၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူများ) နှင့်၎င်းသည်စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အကြောင်းအရာများအကြားစဉ်ဆက်မပြတ်နှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်ထွက်လာသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုစိန်ခေါ်ရန် 'ကြံစည်မှုများ' ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတစ်လျှောက်လုံးကျနော်တို့တစ်ပြိုင်နက်အလုပ်အခြေအနေတွင်ထားရန်သီအိုရီစာပေနှင့်အတူစေ့စပ်။
ကျနော်တို့တလျှောက်လုံးမူထူးခြားတဲ့အမှတ်အသားကလောင်အမည်ကိုသုံးပါ။ မဟုတ်ရင်ညွှန်ပြမဟုတ်လျှင်ကိုးကား [ ... ] မှတ်သားပျက်ကွက်အတူတစျခုမှတဦးတည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှဖြစ်ကြသည်။
စအိုအလေ့အကျင့်ကသူ၏လိင်တံသို့မဟုတ်လက်ညှိုးနှင့်ထိုလူအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်ထိုးဖောက်မှုသို့မဟုတ်ကြိုးစားခဲ့ထိုးဖောက်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်တဦးတည်းချွင်းချက်နှင့်အတူဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်မိတ်ဖက်များအကြားခဲ့ကြသည်။ စအိုအလေ့အကျင့်ယေဘုယျအားဖြင့် '' ရည်းစား / ရည်းစား '' ဆက်ဆံရေးအတွက်လူပျိုတို့နှင့်အမျိုးသမီးအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်း၏သေးငယ်တဲ့လူနည်းစုစအိုလိင်ဆက်ဆံ (ကလိင်တံနှင့်အတူဆိုလိုသည်မှာထိုးဖောက်မှု) သီးသန့် '' လိင်တူချစ်သူ '' လို့ဆိုပါတယ်သော်လည်းကျယ်ပြန့်မှာလည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားဖြစ်ပေါ်နေအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။
ကနဦးစအိုလိင်ကိစ္စအတွေ့အကြုံများခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးများ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရှာဖွေရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဓိကခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးများနေ့နာကျင်စအိုလိင်ဆက်ဆံအစီရင်ခံတင်ပြ: အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးဖြစ်ပျက်ပြီးတာနဲ့သူကကျွန်တော့်ကိုသတိမပေးခဲ့ဘူး၊ နာကျင်မှုပဲရယ်မော] ။ မဟုတ်ဘူး။ အဘယ်သူမျှဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်ပျော်မွေ့နိုင်ဘူး။ ဒါဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ဆိုးဝါးလှတဲ့ […] သူကူညီနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပေမယ့်ငါမသိခဲ့ဘူး။ သင်တင်းမာနေသည်ဆိုပါက ပို၍ နာကျင်ပါလိမ့်မည်။ရယ်မော] အခြေအနေမျိုး၌တည်၏။ (Emma)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာလူပျိုတို့, မူအရစအိုလိင်ဆက်ဆံအပေါ်မကြာခဏစိတ်အားထက်သန်နေစဉ်တွင်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်အကြောင်းကိုတခါတရံ unenthusiastic ခဲ့ကြသည်: “ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အများကြီးပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်” (အလီ); “ တစ်ခါတစ်ရံမှာမိန်းမအင်္ဂါဇာတ်ထက်ပိုသာတယ်လို့ခံစားရပေမယ့်ငါမနှစ်သက်ဘူးလို့ငါမပြောဘူး” (မက်စ်) ။
လူငယ်များ၏မှတ်တမ်းများအရကွန်ဒုံးများကိုမကြာခဏအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးအတွက်သာဖြစ်သည်၊ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောကူးစက်ရောဂါ (STI) ကိုကာကွယ်ခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့ -“ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ဒစ်ကိုမရှုတ်ချပါ” (Carl) ။ အချို့သောတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူများကစအိုမှ STI ကူးစက်မှုသည်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေနည်းကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
ဖော်ပြထားခဲ့ပုံစအိုလိင်ဆက်ဆံအတွက်မှတ်သားကျား, မကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်: ယင်း၏အကျိုးခံစားခွင့် (အပျြောအပါး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု၏ညွှန်ပြချက်) ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမတို့အဘို့မျှော်လင့်ထားကြသည် ဟူ. ၎င်း, ယင်း၏အန္တရာယ်များ-တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲအက်စ်တီအိုင်၏အန္တရာယ်များကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့, နာကျင်မှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးသွားသော၏အန္တရာယ်အပေါ်မယ့်အစားအာရုံစိုက်အမျိုးသမီးတွေသော်လည်းမလူတို့သညျအဘို့မျှော်လင့်ထားဂုဏ်သတင်း-ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ဆုံမေးမြန်းအပျိုစင်ကိုထိန်းသိမ်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ရှောင်ရှားရန်တစ်လမ်းအဖြစ်စအိုလိင်ဆက်ဆံဖော်ပြရန်ခဲ့ပါဘူး။
စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံသောလူငယ်များအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်မှာယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည့်အရာများကိုကူးယူလိုခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပိုမိုတင်းကျပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 'တင်းကျပ်သည်' သည်အမျိုးသားများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးအမျိုးသားများလိုချင်သည့်အရာဖြစ်သည်၊ အမျိုးသမီးများသည်စအိုလိင်နာကျင်မှုကိုအထူးသဖြင့်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိရန်မျှော်လင့်ထားသည်။ 'ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံ' ရှင်းလင်းချက်သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ပုံရသည်။ အနည်းဆုံးတော့လူငယ်များသည်အမျိုးသမီးများကိုမဟုတ်ဘဲလှုံ့ဆော်သူများအဖြစ်သာမြင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းလူငယ်များ၏မှတ်တမ်းများမှအခြားအရေးကြီးသောရှင်းလင်းချက်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာဗျူးများမှထွက်ပေါ်လာသောအဓိကအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များမှာအမျိုးသမီးများအားတွန့်ဆုတ်မှု၊ အမျိုးသမီးများအတွက်နာကျင်မှုနှင့်မျှော်လင့်ချက်မရှိခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုကင်းမဲ့မှုများကိုဖော်ပြသည့်ကြားမှထိုအလေ့အကျင့်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုရှင်းပြရန်ကူညီသည် လူတို့သညျအကြားယှဉ်ပြိုင်မှု, (ကအမျိုးသမီးများအတွက်နာကျင်ဖြစ်လတံ့သောထင်ရသောဆနျ့ကငျြမျှော်လင့်အတူ) 'သူတို့ကကျင့်ကိုကျင့်လျှင်လူများကကြိုက်နှစ်သက်ရမယ်' 'သောပြောဆိုချက်ကို; နှင့်-လိုအပ်နေပြီလို့-ပုံမှန်အကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် '' မတော်တဆ '' ထိုးဖောက်မှု၏။
မဟုတ်ပေမယ့်လေ့လာမှုအတွက်အားလုံးလူပျိုတို့စအိုလိင်ဆက်ဆံ (ဥပမာ, က '' မပေးထိုသူတို့အဘို့ '' ဟု) ရှိသည်ဟုငျြတယျ, များစွာသောလူတို့သညျသူတို့အလေ့အကျင့်ကြိုးစားကြဖို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အားပေးအားမြှောက်ဆိုသည်ကား, အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများကမူအမျိုးသားများကသူတို့၌စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိကြောင်းသူငယ်ချင်းများအားပြောလိုကြသည်။ အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုတွင်ပါဝင်သောအမျိုးသားများကစအိုလိင်သည် 'ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သည့်အရာ' ဖြစ်ပြီး၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများကအမျိုးသမီးများသည်ယခင်စာပေများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သောလိင်အဆင့်နှစ်ဆသောတူညီသောလုပ်ရပ်အတွက်သူတို့၏ဂုဏ်သတင်းကိုစွန့်စားခဲ့ကြသည်20
စအိုလိင်ဆက်ဆံမိန်းမတို့အဘို့မလွှဲမရှောင်နာကျင်ဖြစ်ပြီး, ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးမှနာကျင်မှုချိတ်ဆက်မရပေမယ့်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုမကြာခဏလည်းစအိုလိင်ဆက်ဆံမိန်းမတို့အဘို့တကယ်တော့ပျော်စရာဖြစ်ဘူးသောအထင်ရသောဆနျ့ကငျြအမြင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းအားကောင်းမောင်းသန်နေသော်လည်း: သိသာထင်ရှားတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကလုပ်ပေးလျှင်ပျော်မွေ့လုပ်ပါ။ (နောမိ) တော်တော်များများရှိတယ်၊ မိန်းကလေးတော်တော်များများကအဲဒါကိုနှစ်သက်ကြတယ် ဒါပေမယ့်ငါထင်တာတော့မိန်းကလေးအများစုကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုနဲ့လုပ်ချင်ကြတာပဲ။ (Shane)
ဒါကြောင့်ပျော်စရာဖြစ် '' ရမယ် '' ဒါကပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါအလေ့အကျင့်အတွက်စေ့စပ်ဘူးသောသူတို့သည်တစ်ဦးရှင်းပြချက်အဖြစ်အကြံပြုခဲ့သည်။
နာကျင်မှုကြုံနေရအမျိုးသမီးများမကြာခဏနုံသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်အဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့ကြသည်။ ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုပိုမို '' အပန်းဖြေ 'ဖို့လိုအပ်အမျိုးသမီးများ,' 'ကရန်အသုံးပြုရ' ရန်သူကပြောပါတယ်: ကောင်လေးကဒါကိုနှစ်သက်တယ်လို့ငါထင်တယ် ငါထင်တာကတော့ယောက်ျားလေးကဒါက porn နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရတာတွန်းအားပေးတာပဲ။ သူတို့စမ်းကြည့်တာပေါ့။ ကောင်မလေးကကြောက်တယ်၊ ကောင်မလေးကကောင်လေးကသူတို့ကိုလိုချင်လို့ကြောက်တာပဲ။ ပြီးတော့လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်။ သူတို့ကြောက်တာကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ပျော်တာမဟုတ်ဘူး ငါ, စအိုနှင့်အတူတူသောသင်သိရ သငျသညျဆန္ဒရှိမဟုတ်ပါဘူးလျှင်သင်အနားယူကြဘူးအကယ်၍ သင်၌ရှိပါကသင်သည်အပြင်ဘက်နှင့်အနီးဆုံးကြွက်သားနှစ်ခုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးအတွင်း၌၎င်းသည်အတင်းအဓမ္မလိုမျိုးဖြစ်သည်။ သင်ကြောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်တင်းကျပ်စွာရှိနေပြီးယင်းတို့ကိုမှေးမှိန်သွားအောင်မပြုလုပ်နိုင်လျှင် ' သငျသညျစအိုလိင်ကြိုးစားပြီးအတင်းအကျပ်ပြုလျှင်။ (မာကု [ကျွန်ုပ်တို့၏အလေးပေး])
အမျိုးသမီးတစ်ဦး '' ကြောက်လန့် 'သို့မဟုတ်စအိုလိင်ဆက်ဆံဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်ရသောဒီမကြာခဏဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အင်တာဗျူးနှင့်အတူတစ်ဦး shared နားလည်မှုယူဆ, နေရာယူပြီးသောတစ်ဦးဇာတ်လမ်းထဲမှာ' 'ဆန္ဒရှိမဟုတ်' 'စေခြင်းငှါစိတ်ကူးဖို့နီးပါးနှင့်အနောက်တိုင်း, မာကုကိုရည်ညွှန်းကြောင်းမှတ်ချက် အမှု။ တခြားနေရာအင်တာဗျူးအတွက်သူ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) တစ်ခုစအိုလိင်ဆက်ဆံ '' စလစ် '' စဉ်အတွင်းသူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုထိခိုက်စေဘဲလျက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောသွားနှင့်ဒါ '' ကိုချွတ်ဖြေလျော့ '' နှင့် ပတ်သက်. မိမိအဆွေးနွေးချက်ကြောင့်ဖြစ် '' သင့်ပါတယ် '' ဘယ်လိုသူ့ကိုယ်ပိုင်-ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးမကြာသေးမီ-နားလည်မှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် '' မတော်တဆ '' ထိုးဖောက်မှု၏ပုံမှန်
အမျိုးသမီးတွေယေဘုယျအားဖြင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ဆန္ဒရှိမဟုတ်ဘူး, ဒါကြောင့်ဖျောင်းဖျသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်ခံရဖို့ဖြစ်စေလိုအပ်မယ်လို့စိတ်ကူးများစွာသောသင်တန်းသားများအားဖြင့်ပေါ့ပေါ့ယူခံရဖို့သလိုပဲ။ တောင်မှမဟုတ်ရင်ထင်ရသောဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့မိတ်ဖက်အတွက်အချို့တို့သည်သူ၏စိတ်ထိခိုက်ဖို့ကဖွယ်ရှိယုံကြည်နေသော်လည်း၎င်းတို့၏တွန့်ဆုတ်မိတ်ဖက်တွေနဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံရန်တွန်းအားပေးရန်သလိုပဲ (အခြားအမျိုးသားများက ၄ င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုထိခိုက်နစ်နာစေမည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ကြောင်းကိုလည်းသတိပြုသင့်သည်။ အမျိုးသမီးများအားသွေးဆောင်ခြင်းသည်စအိုလိင်ဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအကြောင်းကိုပိုမိုများပြားသောသို့မဟုတ်လျော့နည်းသောအတိုင်းအတာအထိဖော်ပြပေးနိုင်ပြီး၊ များသောအားဖြင့်ဖော်ပြလေ့ရှိသောအမျိုးသားများထံမှထပ်ခါတလဲလဲလေးနက်သောတောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူ။
အမျိုးသမီးများနေ့မထားဘဲသူတို့မှ acquiesce သို့မဟုတ်အစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်တန်းတူမိတ်ဖက်ဖြစ်ခြင်းထက်သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက် '' အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုမှုများ, ခုခံတွန်းလှန်မယ်လို့ဖြစ်စေကြောင်းယူသလိုပဲ။ '' အဘယ်သူမျှမ '' လို့ပြောနိုင်ဖြစ်ခြင်းမကြာခဏအခြေအနေကိုသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအပြုသဘောဥပမာအဖြစ်မိန်းမများအားဖြင့်ကိုးကားခဲ့သည်။
တချို့ကယောက်ျားလည်းသူတို့စအို၎င်းတို့၏လက်ချောင်းသို့မဟုတ်လိင်တံနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ထိုးဖောက်နှင့်သူမသူတို့ကိုရပ်တန့်မည်မဟုတ်ကြောင်းမျှော်လင့်တဲ့ '' သူကကြိုးစားကြည့်ရှု '' ချဉ်းကပ်မှု, တာဖော်ပြခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကပြောသည်လျှင်ရှိန်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောသည်ဟုသူ "တွင် [မိမိ] လက်ညှိုးကိုချပြီး" စတင်ခဲ့သည့်အခါ '' အဘယ်သူမျှမ '' သူကကြိုးစားနေစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ,: "ငါ [ ... ] အလွန်ဖြားယောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်ရုံပဲသူတို့ပဲတက်တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်သင် "ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါစေရမှီတိုင်အောင်သွားစောင့်ရှောက်မယ့်စောင့်ရှောက်လိုပဲ။
'စမ်းကြည့်ပါ ဦး' ယေဘုယျအားဖြင့်မိန်းမကိုနာကျင်စေခြင်း (သို့) ယောက်ျား၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည်အမှန်တကယ်မ ၀ င်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်မိန်းမကိုနာကျင်စေခြင်းဖြစ်စေ၊ (ဂျက်) အမျိုးသမီးမှနှုတ်ဖြင့် 'no' သည်စအိုထိုးဖောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုမတားဆီးနိုင်ပါ - သူကအဲဒီမှာသူကချပြီးကြိုးစားခဲ့သည်။ [အင်တာဗျူး] ညာ ထိုအခါငါပဲ '' အဘယ်သူမျှမ '' ဟုပြောသည်။ [အင်တာဗျူး] သူပထမဦးဆုံးအသငျသညျဟုမေးသို့မဟုတ်သူ့ကြိုးစားကြည့်ခဲ့ဘူးခဲ့? အမ်သူကငါ့ကိုအရင်မေးတယ် ငါက“ မဟုတ်ဘူး” လို့ပြောပေမယ့်သူကသူကြိုးစားခဲ့တယ်၊ [အင်တာဗျူး] ညာ '' အဘယ်သူမျှမအခွင့်အလမ်း '' ။ (Molly)
အချို့ကိစ္စများတွင်ထိုမိန်းမသည်-ဒစ်ဂျစ်တယ်သို့မဟုတ်၏စအိုထိုးဖောက်မှု ( 'ကချော်') မတော်တဆဖြစ်ပျက်ပြီးလျှင်အဖြစ်ယောက်ျားမိန်းမတို့အားဖြင့်ဖော်ပြထား penile-ခဲ့သည်။ ဥပမာ, အထက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့မာကု, သူလိင်အင်္ဂါ-လိင်တံလိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်း '' ချော် 'နှင့်စအိုသူ့ရည်းစားထိုးဖောက်လာသောအခါအချိန်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသို့ပြောသည်။
ဒေတာ-ကျနော်တို့အင်တာဗျူး-မှာအစီရင်ခံစာများအပေါ်အားကိုး၏သဘောသဘာဝရှိနေသော်ငြားလည်းအရာ '' စာရွက်များ '' အဖြစ်ဖော်ပြဖြစ်ရပ်များစစ်မှန်စွာရည်ရွယ်တဲ့ခဲ့ကြသည်ဖို့အတိုင်းအတာအကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ တယောက်သောသူသို့သော်သူသည်ဟုလျှောက်သောပထမဦးဆုံးအင်တာဗျူးမှာတစ်ဦး '' စလစ် '' ဖော်ပြထားအင်တာဗျူး-မိမိမတော်တဆမှုသူဒုတိယအင်တာဗျူးမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့အကောင့်တစ်ခုရည်းစား-ခဲ့ပြောခဲ့တယ် said: သင်ကဆိုပါတယ်အချိန်ဘယ်မှာ [ ... ] ရှိခဲ့ဖူးသောပထမဦးဆုံးအင်တာဗျူးအတွက် [အင်တာဗျူး] သင်တို့ကိုငါကဆိုပါတယ်ထင် [ ... ] [မိမိလိင်တံ] ချော်။ ကောင်းပြီငါကြိုးစားခဲ့, ငါကချော်ကပြောသည်။ [အင်တာဗျူးလုပ်သူ] ဒါကြောင့်တကယ်ချော်မသွားဘူးလား။ ဒါမတော်တဆမဟုတ်ခဲ့တာလား မဟုတ်ပါ၊ မဟုတ်ပါ၊ မတော်တဆမှုမဟုတ်ပါ။ (ဂျက်)
'' စာရွက်များ '' အဖြစ်ဖြစ်ရပ်များဖော်ပြဖြစ်လျှင်, ထိုးဖောက်မှုတမင်များနှင့် Non-ကြည်ကြည်သောဖြစ်နိုင်ခြေကျော်ဖုံးကွယ်ဖို့ယောက်ျားမိန်းမတို့ကို enable ပေမည်။
အဆိုပါဇာတ်လမ်းများအမျိုးသမီးငယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့စအိုလိင်ဆက်ဆံချင်မယ်လို့နည်းနည်းမျှော်လင့်အကြံပြုသည်။ အတော်များများကလူပျိုတို့, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရှင်းလင်းစွာစအိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုထိုးဖောက်ဖို့လိုဖော်ပြထား။ ဒါကမတိုက်ဆိုင် '' ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် '' နှင့်မိန်းမကို၏ '' သှေးဆောငျ '' စအိုလိင်ဆက်ဆံ ပတ်သက်. ဇာတ်လမ်းများ၏ဘုံ features တွေခဲ့ကြသည်ရှင်းပြကူညီလိမ့်မည်။
စအိုလိင်ကိစ္စအတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ဖူးသောသူတို့အားအနက်လူအနည်းငယ်နှင့်ဤလူငယ်အသက်အရွယ်အုပ်စုအကြားတစ်ဦးတည်းသာအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့အကောင့်ထဲမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ သူ Alicia, ပျြောမှေ့စစအိုထိုးဖောက်မှု narrating တစ်ခုတည်းသောမိန်းမ, ဥပမာအမျိုးသမီးများ၏စအိုလိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်သွားလာရခက်ခဲသောရှုပ်ထွေးမှုအချို့ကိုဥပမာပေးသည်။ သူမသည်မျှတသောဘုံပုံစံကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမအနေဖြင့်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်၊ သူမသည်နာကျင်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးစအိုထိုးဖောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူမ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်သည်မေးခွန်းထုတ်စရာဒုတိယအတွေ့အကြုံလည်းရှိခဲ့သည်။ သူမသည်စာရိတ္တပျက်ပြားမှုမရှိသော်လည်းသူမဇာတ်လမ်းအားသူမ၏ကိုယ်ပိုင်အေဂျင်စီ ('ငါသိချင်ခဲ့တယ်') ကိုအပြုသဘောဆောင်သည့်ပြန်ပြောပြပြီးသူမသည်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမည်သို့ခံစားခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အလေ့အကျင့်၌တည်၏။
သူ၏အဖော်မပြုမီစအိုလိင်ဆက်ဆံခဲ့လေသည်။ သူမကသူ့ကိုနှင့်အတူစအိုလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ် '' တကယ်နာကျင် '' ဖြစ်ခဲ့သည်: ငါစစတော့မယ်ဆိုတာမစမ်းချင်ဘူး၊ အစပိုင်းမှာတော့မသေချာဘူး။ ဒါပေမယ့်သူကမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ သူက 'အဆင်ပြေတယ်' လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါစိတ် ၀ င်စားတဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကြိုးစားချင်သေးတယ်။ သူဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားရတာလဲလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ငါသိချင်ခဲ့တယ်။ […] ဒါကြောင့်ငါထင်တယ် […] ငါသူ့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တာ။
သူမသည်သူတို့ကပထမနှင့်ဒုတိယအင်တာဗျူးအတွက်ကွဲပြားခြားနားစအိုလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဒုတိယအခါသမယဖော်ပြထား: [ပထမဦးစွာအင်တာဗျူး] ကျနော်တို့ [အင်္ဂါဇာတ်] လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်အခြားအချိန်နှင့်က [မိမိလိင်တံ] ရုံမျိုး၏လမ်း [သူမ၏စအိုထဲသို့] အတွက်ချော်။ [ဒုတိယအအင်တာဗျူး] သူပဲမျိုးအတွက်ချော် [ ... ] ငါကသူကငါ့အဘို့ကဒီထက်နာကျင်စေလိမ့်မယ်ထင်လို့ထင်ပါတယ်။ ထိုအခါငါကသူလိုကကဲ့သို့ငါ့ကိုစေနိုင်သည်ထင်ထင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအင်တာဗျူးမှာသူ Alicia ကဆုံးဖြတ်ချက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ဘဲအာရုံစိုက်ဆွဲရန်ဖြစ်ကောင်းတွန့်ဆုတ်, ( 'ကပဲမျိုးအတွက်ချော်') မတော်တဆခဲ့ကြသည်သော်လည်းအဖြစ်ဖြစ်ရပ် narrating, ဖြစ်ပျက်အကြောင်းကိုစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအင်တာဗျူးမှာသူမကသူတမင်တကာ (သူမလည်းအင်တာဗျူးတွေအကြားကအကြောင်းသူမ၏မိတ်ဖက်ဖို့ပြောပြီဖြစ်နိုင်သည်) သူမ၏ထိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်းရှင်းလင်းခဲ့သည်။ သူမသည်တစ်ဦးအတန်ငယ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့လမ်းအတွက်ကြောင့်တင်ဆက် ( 'သူကငါ့ကိုကြိုက်စေနိုင်သည်ထင်') ပေမယ့်သူမ၏ခွင့်ပြုချက်မရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
နှစ်ဦးစလုံးအင်တာဗျူးများမှာသူမကတူညီသည်လူနှင့်အတူနောက်ဆက်တွဲစအိုလိင်ဆက်ဆံခံစား, သူတို့၏တစ်ခုခုကြောင့်အစပျိုးစေခြင်းငှါမည်မျှအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ သူ Alicia စအိုလိင်ဆက်ဆံရာမှအော်ဂဇင်အပါအဝင်အပျော်အပါး, ကြုံနေရဖော်ပြထားသောငါတို့သည်တွေ့ဆုံမေးမြန်းတစ်ဦးတည်းသောအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ် ငါအရမ်းသဘောကျတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါသူ့ကိုအရမ်းသဘောကျတာပဲ၊ ငါ့ Bum ကိုဆန့်ကျင်တာ၊ ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ ငါဒါငါသဘောကျတာငါထင်၊ မသေချာဘူး
သူမလိင်တူဆက်ဆံမှုကိုသူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံသူအားသူမကိုယ်ကိုသူမကိုယ်တိုင်တင်ပြရာတွင်သူမကိစ္စမှာပုံမှန်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ငါကပိုအဘို့အသွားပါ။ ငါကပိုပြီးစတင်ချင်ပါတယ်။
ယခင်အလုပ်တှငျကြှနျုပျတို့ပုံ coercive ဖြစ်ရပ်များ၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုပြသကြ21 ကာဆက်လက်ဆက်ဆံရေးဆက်စပ်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအတွေ့အကြုံများသူမကခဲ့သောအလေ့အကျင့်ကိုခံစားဆီသို့ရောက် လာ. , အထူးသဖြင့်သည်အတိုင်းသူတစ်ဦးတည်ငြိမ်သောဆက်ဆံရေးမျိုးအတွင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု၏ဇာတ်ကြောင်းသို့ကနဦး, ဒီထက်ပျော်စရာသူတွေကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ပထမဦးဆုံးမှာနာကျင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အပြုသဘောရှိသော်လည်း Alicia ၏အကောင့်တွင်တွန့်ဆုတ်နေသည့်လက္ခဏာများလည်းပါ ၀ င်သည် (“ ငါမစမ်းချင်ဘူး […] ငါမသေချာဘူး”) ။ သူမအလေ့အကျင့်ကိုနှစ်သက်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုနေစဉ်တွင်ပင်သူမ၏ဇာတ်ကြောင်းသည်စအိုလိင်ကိုတွန်းလှန်နေသည့်အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုရေးမျှော်လင့်ချက်များကြောင့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပုံသွင်းထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အလားတူပင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားပါးစပ်ဖြင့်ထိုးဖောက်။ မရခြင်းကိုအလိုအလျောက်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲတိုက်ရိုက်မေးခွန်းများအပြီးဖော်ပြခြင်း၊ အမျိုးသားများအားလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုသဘောအမြင်ကိုသာဖော်ပြရန်အခြားယောက်ျားများအားဖော်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြားအလုပ်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။22 ,23
တွေ့ဆုံမေးမြန်းမကြာခဏစအိုလိင်ဆက်ဆံဘို့ '' ရှင်းပြချက် '' အဖြစ်ညစ်ညမ်းကိုးကား, သေးသာယောက်ျားများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအဖြစ်ဤကြည့်ဖို့ပုံရသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများစအိုလိင်ဆက်ဆံအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံအဘယ်ကြောင့်တစ်ခဝါသည်ရုပ်ပုံသူတို့၏အကောင့်များမှပေါ်ထွက်လာ။ ဒါဟာစအိုလိင်ဆက်ဆံအထက်ဖော်ပြထားတဲ့ Key ကိုရှင်းလင်း themes များနှင့်အတူဆက်နွယ်နေအနည်းဆုံးငါးတိကျသော features တွေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပျက်ပုံ:
ပထမအချက်အနေဖြင့်အချို့သောအမျိုးသားများ၏ဇာတ်လမ်းများအရစအိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်သဘောတူခြင်းတို့သည်သူတို့အတွက်အမြဲတမ်း ဦး စားပေးမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခံများကအမျိုးသမီးများအနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခံရခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏဆိုသလိုပြောဆိုလေ့ရှိသည် (“ စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အတင်းအကျပ်လုပ်ခိုင်းလျှင်သင်သူတို့ကိုအမြစ်ဆွဲနိုင်သည်”;“ သူတို့နို့မတိုက်ခင်အထိဆက်လုပ်သွားမှာပါ”) သူတို့ကအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းကိုစအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်မျှော်လင့်ရုံမျှသာမက ( ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်အတွက်မဟုတ်လျှင်တောင်မှ၎င်းတို့သည်များစွာသောသူတို့ကိုလက်ခံသည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအတိအလင်းက၎င်းကိုစိန်ခေါ်မှုမပြုပါ။ အချို့ဖြစ်ရပ်များအထူးသဖြင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူများကတင်ပြသော 'မတော်တဆ' ထိုးဖောက်မှုသည်၎င်းတို့အားအဓမ္မပြုကျင့်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရခြင်းရှိ / မရှိနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးစရာဖြစ်သည် (ဆိုလိုသည်မှာသဘောမတူသောထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှု)၊ သို့သော်ဂျက်၏အင်တာဗျူးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် 'မတော်တဆမှု' ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် ရည်ရွယ်ချက်။
ဒုတိယအချက်အစအိုလိင်ဆက်ဆံဘို့ badgered ခံအမျိုးသမီးများကိုပုံမှန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ပုံပေါ်ပါတယ်။
'' လူတိုင်းအတွက် '' ကအတော်ပင်ကြောင့်တတိယ, လေ့ပျံ့နှံ့နေတဲ့စိတ်ကူးများနှင့်ချို့ယွင်းချက်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးသူတို့ရဲ့ခံစားလျှို့ဝှက်စောင့်ရှောက်ခြင်းသော်လည်းကောင်းဖြစ်ကြဘူးသောသူအမျိုးသမီးများ, စအိုလိင်ဆက်ဆံဘို့တွန်းအားပေးတဲ့လူကိုရိုးရှင်းစွာလုပ်ဖို့သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် '' ဆွဲဆောင် 'သောမှားစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့ကူညီ '' အများဆုံးမိန်းကလေးငယ်များချင်ပါတယ် '' အရာတစ်ခုခု။ Alicia ၏ဇာတ်ကြောင်း၌ပင်စအိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်သက်ကြောင်း Alicia မှအစီရင်ခံသော်လည်းအခြားအမျိုးသမီးများသည်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဖော်ပြသည့်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းသည့်လက္ခဏာများပါဝင်သည်။
စတုတ္ထစအိုလိင်ဆက်ဆံယနေ့အထူးသဖြင့်လူတို့သညျအဘို့, (hetero) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုအမှတ်အသားဖြစ်ပေါ်လာသည်။18 တွေ့ဆုံမေးမြန်းခံသူများနေထိုင်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်အမျိုးသားများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအတွက်ဆုချပေးပုံရသည် ('အပေါက်တစ်ခုစီတိုင်း၏ရည်မှန်းချက်') နှင့်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိအမျိုးသမီးများအားလိင်ဆိုင်ရာ 'စွန့်စားခန်း' လုပ်ရပ်များ (လိုက်နာခြင်းမရှိ၊ အမျိုးသမီးများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်နိုင်သောအခြေအနေနှင့်ဟန်ချက်ညီရမည်။ အမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အချို့ကိုနှစ်သက်သို့မဟုတ်ရွေးချယ်ရန်ဖိအားပေးခံရနိုင်သည် - ဂေးလ်ကခေတ်သစ်မီဒီယာများတွင် 'postfeminist sensibility' ကိုဖော်ပြထားသည်။ ထိုတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိင်ကွဲလိင်အရစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ပုံစံများနှင့်ကိုက်ညီသောအပြုအမူများကိုရွေးချယ်သည်ဟုယူဆရသည်။24 အမျိုးသမီးများ၏ခံနိုင်ရည်ကိုချိုးဖောက်သောအမျိုးသားများအနေဖြင့်စအို heterosex ကိုအများအားဖြင့်လိင်အင်္ဂါနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းဇာတ်လမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။25 နှင့်ဖြစ်ကောင်းအိမ်မထောင်မီမိန်းမကိုယ်လိင်ဆက်ဆံမှုပုံမှန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ဒါဖြစ်ကောင်းတစ်ဦး '' သိမျးပိုကျ '' ၏လျော့နည်းသည်အဘယ်မှာရှိဗြိတိသျှအခြေအနေတွင်အချို့ဒီဂရီမှသူတို့ကိုအစားထိုးပါပြီ။
ပဉ္စမ, များစွာသောလူတို့သညျမလွှဲမရှောင်ကြောင့်ကြည့်ရှု, မိန်းမတို့အဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့နာကျင်မှုစိုးရိမ်ကြောင်းဖော်ပြကြဘူး. (ထိုကဲ့သို့သောနှေးကွေးထိုးဖောက်မှုကဲ့သို့) လျော့နည်းနာကျင်နည်းစနစ်ခဲဆွေးနွေးကြ၏။
လက်ရှိတွင်ဤဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုပုံသဏ္,ာန်နှင့်စအိုစလိင် heterosex ဓလေ့ကိုကျင့်သုံးခြင်းသည်ဤငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်အုပ်စုအတွက်မူဝါဒနှင့်လိင်ပညာရေးတို့တွင်အကြီးအကျယ်လျစ်လျူရှုခံရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးများအတွက်နာကျင်မှု၏မလွှဲမရှောင်နိုင်ခြင်း, သို့မဟုတ်အလားအလာ coercive အပြုအမူအပေါ်အသိအမှတ်မပြုသို့မဟုတ်ရောင်ပြန်ဟပ်လူမှုရေးပျက်ကွက်အဖြစ်သဘောထားများ, စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ Alicia ၏ဖြစ်ရပ်သည်အမျိုးသမီးများသည်အပျက်သဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများကိုထိန်းချုပ်မှု၊ အလိုဆန္ဒနှင့်အပျော်အပါးဆိုင်ရာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ သူမကသူမအားအကောင့်တွင်အလေးထားဖော်ပြခဲ့သည်။
ကျနော်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပျြောမှေ့စစအိုအလေ့အကျင့်ကဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုအကြားမဖြစ်နိုင်ချေဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုကြဘူး, မလူအပေါငျးတို့ဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်အကြပ်ကိုင်လာဖို့လို။ အစား, anal heterosex ၏ဇာတ်ကြောင်းများတွင်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အပျော်အပါးများသည်မကြာခဏပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့မရှိခြင်းသည်အမှတ်အသားပြုခြင်းနှင့်စိန်ခေါ်မှုမသာရုံသာမကလူငယ်များစွာကပင်မျှော်လင့်ထားပုံရသည်ကိုအလေးထားလိုပါသည်။
ယခင်အလုပ် (ဥပမာ, အလေ့အကျင့်အစပျိုးခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်ဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်) စအိုလိင်ဆက်ဆံဘို့အဖြစ်ကောင်းစွာအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုများအတွက်အဖြစ်တည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါလိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာပါဝါကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်ကွဲပြားခြားနားလည်ပတ်စေခြင်းငှါအကြံပြုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ '' script များ '' သိရသည်။13 ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်သွဇာအောကျကျန်ရစ်လျှင်အကျပ်ကိုင်သောဤငယ်ရွယ်အသက်အရွယ်မှာစအိုလိင်ဆက်ဆံများအတွက်ကြီးစိုး script အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာနိုင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
နောက်ထပ်အလုပ်အလားတူ coercive ဟောပြောချက်များသည်အခြားနိုင်ငံများတွင်လူငယ်များအကြားလည်ပတ်ရာမှအတိုင်းအတာကိုအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ဤသည် epidemiological လေ့လာမှုများအဘို့အပုံမှန်အတိုင်းလိမ့်မယ်ထက်သေးငယ်တဲ့နမူနာတစ်ခု In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူတစ်ဦးအရည်အသွေးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သုံးတည်နေရာနှင့်ကွဲပြားခြားနားလူမှုရေးအုပ်စုများအထိချဲ့ကာရာ။ '' generalisability '' ၏အယူအဆအရည်အသွေးသုတေသနအတွက်လျှောက်ထားရပါမည်ဖြစ်စေမဆွေးနွေးငြင်းခုံတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်,26 ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီလေ့လာမှုတွေ့ဆုံမေးမြန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုသည်ပြင်ပတွင်လျှောက်ထားဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းလုလင်တို့နှင့်အမျိုးသမီးအကြားစအိုလိင်ကိစ္စအလေ့အကျင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအသုံးဝင်သော, ယုံကြည်အလုပ်လုပ်ယူဆချက်သို့မဟုတ်သီအိုရီကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းငြင်းခုန်လိမ့်မယ်။
ကပါဝင်သင့်သောအရာကိုအထူးသလိင်ပညာရေးနှင့်ကမ္ဘာ့ဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။27 ,28 အက်စ်တီအိုင်, HIV နှင့်အကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အဓိကဦးစားပေးကြသည်။ ဤမှတျတမျးမြားထုတ်ဖေါ်အဖြစ်မရှိသေးပါကတည်ရှိရှိရာလိင်ပညာရေး, ခဲ, အကျပ်ကိုင်ရောဂါကူးစက်ဘို့အယင်း၏အလားအလာရှိနေသော်လည်းအမျိုးသမီးတွေ-ထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားနှင့်အကြားစအိုလိင်ဆက်ဆံအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်, အမှာစကားပြောကြားသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာတည်ရှိပါတယ်ခဲ့သည်ရှိရာအင်္ဂလန်, ခုနှစ်, အပျော်အပါး, နာကျင်မှု, သဘောတူညီခကျြမြားနှငျ့အကျပ်ကိုင်၏ဆွေးနွေးမှုများကောင်းသောလိင်ပညာရေးတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်ပေမယ့်ထိုကဲ့သို့ပညာရေးအထီးကျန်ဖြစ်နေဆဲ, ad hoc နဲ့ Non-မသင်မနေရ။
ဒီလေ့လာမှုမှာလူငယ်များအကြားစအိုလိင်ဆက်ဆံနာကျင်မှု, အန္တရာယ်နှင့်အကျပ်ကိုင်အားပေးစကားတစ်ဦးအခြေအနေတွင်ရာအရပျကိုယူပြီးခံရဖို့အားထငျရှား။ စအိုလိင်ဆက်ဆံပစ်မှတ်ထားအန္တရာယ်လျှော့ချရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နဲ့သဘောတူညီခကျြနဲ့ပတျသကျတဲ့ဆှေးနှေးမှုအားပေးကူညီရန်အန္တရာယ်များနှင့်နာကျင်နည်းစနစ်လျှော့ချရန်နှင့်အကျပ်ကိုင်ပုံမှန်ကြောင်းအမြင်များကိုစိန်ခေါ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါစာရေးဆရာလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တစ်ခုအစောပိုင်းကမူကြမ်းအပေါ်သူတို့၏မှတ်ချက်များအတွက်ကေးကကောင်းစွာနဲ့တိ Rhodes စီမံကိန်းဒီဇိုင်းကို၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်၎င်းတို့၏အလှူငွေဘို့နှစ်ခုသုံးသပ်ရေးနှင့် Amber Marks နှင့် Crofton က Black ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မျှဝေသူများ CM နှင့် RL လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အလုပ်၏စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, အကငျြ့နှင့်အစီရင်ခံဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ CM ဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်များအတွက်အာမခံသည်။
ဒီလေ့လာမှုများအတွက်ရန်ပုံငွေရှာခြင်းရန်ပုံငွေရှာခြင်းဟာစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးသုတေသနကောင်စီ (ဗြိတိန်) res-062-23-1756 မှရရှိသောခဲ့သည်။
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအတည်ပြုချက်ကိုလန်ဒန်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အပူပိုင်းဒေသဆေးပညာသုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှကျင့် ၀ တ်ခွင့်ပြုချက်ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့သည် (လျှောက်လွှာနံပါတ် ၅၆၀၈) ။ ပါ ၀ င်သူများအားလုံးသည်ဤသုတေသနတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမပြုမီအသိပေးအကြောင်းကြားမှုကိုပေးခဲ့သည်။
ဤသည်ဖြန့်ဝေဖို့အခြားသူများကိုခွင့်ပြုထားသည့်ကို Creative Commons Attribution (3.0 BY CC ကို) လိုင်စင်, ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီဖြန့်ဝေထားတဲ့ Open ကို Access ကိုဆောင်းပါး, remix ဖြစ်ပါသည်, ဤလုပ်ငန်းအပျေါမှာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တည်ဆောက်, စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းများအတွက်, မူရင်းလက်ရာစနစ်တကျကိုးကားဖြစ်ပါတယ်ပေးအပ် ။ ကြည့်ရှုပါ: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Copen ကို C,
။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာ: မိသားစုကြီးထွား၏ 2006-2008 အမျိုးသားစစ်တမ်းမှအချက်အလက်များကို။ Hyattsville, MD: ကနျြးမာရေးစာရင်းအင်းများအတွက်အမျိုးသားစင်တာ, 2011: 1-36 ။
။ Baltimore, Maryland လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်းလူငယ်များအကြားပါးစပ်နှင့်စအိုလိင်ကိစ္စထိတွေ့မှုအတွက်တိုး။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး 2008; 42: 307-8 ။
Erens B က,
။ ဗြိတိန်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: မိတ်ဖက်, အလေ့အကျင့်များနှင့် HIV ပိုးအန္တရာယ်အပြုအမူ။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 2001; 358: 1835-42 ။
Tanton ကို C,
Prah P ကို,
။ ဘဝသင်တန်းမှတစ်ဆင့်နှင့်အချိန်ကျော်ဗြိတိန်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်လူနေမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများ: လိင်သဘောထားအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စစ်တမ်းများကနေတွေ့ရှိချက်များနှင့်လူနေမှုပုံစံ (Natsal) ။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 2013; 382: 1781-94 ။
ရေလွှမ်းမိုးခြင်း M က
။ ထိတွေ့မှုနှင့်ဖွယ်ရှိသက်ရောက်မှု၏အတိုင်းအတာအပေါ်သြစတြေးလျသက်သေအထောက်အထားအတွက်လူငယ်နှင့်ညစ်ညမ်း။ ဘရုစ်, သြစတြေးလျ: အဆိုပါသြစတြေးလျတက္ကသိုလ် 2003 ။
Alys L ကို,
Massey K သည်,
။ 'အခြေခံအားဖြင့် ... .porn သည်နေရာတိုင်းဖြစ်သည်' - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ကလေးများနှင့်လူငယ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုအပေါ်လျင်မြန်စွာသက်သေအထောက်အထားအကဲဖြတ်ခြင်း။ London: ကလေးသူငယ်ကော်မရှင်နာရုံး၊ ၂၀၁၃ ။
, JC Manning
။ မြီးကောင်ပေါက်ရက်နေ့တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနသုံးသပ်ချက်။ လိင်စွဲ compulsive 2012; 19: 99-122 ။
Rojas က M
။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူမှ exposure ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး 2009; 45: 156-62 ။
Tyden T က
။ ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်မြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အကြားအသင်းအဖွဲ့များ။ int J ကို STD AIDS ရောဂါ 2005; 16: 102-7 ။
[Abstract / အခမဲ့အပြည့်အဝစာသားကို]
။ လိင်ကွဲစအိုလိင်ဆက်ဆံ: တစ်ခွဲ, High-အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ behaivor ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2000; 29: 357-73 ။
Gorbach pm တွင်,
။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သုံးလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါဆေးခန်းများတွင်ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲအကြားစအိုလိင်ဆက်ဆံ။ လိင် Transm dis 2009; 36: 193-8 ။
။ လိင်ကွဲစအိုလိင်ဆက်ဆံ: ပျံ့နှံ့, ယဉ်ကျေးမှုအချက်များနှင့် HIV ပိုးကူးစက်မှုကိုများနှင့်အခြားကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များ, အပိုင်းဗြဲ အေအိုင်ဒီအက်စ်လူနာပြုစုစောင့်ရှောက်မှု ST 1999; 13: 717-30 ။
။ အနက်ရောင်နှင့်လက်တင်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများအကြားလိင်ကွဲစအိုလိင်ဆက်ဆံ: တစ်ညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက် High-အန္တရာယ်အပြုအမူ။ J ကိုလိင် Res 2013; 50: 715-22 ။
Smith က, G
။ လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူစအိုလိင်ဆက်ဆံ: နိုင်ငံတကာရှုထောင့်။ Venereology 2001; 14: 28-37 ။
။ ကျနော်တို့အလေးအနက်ထား anodyspareunia ယူသငျ့သလော ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲအမျိုးသမီးလက်ခံစအိုလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းနာကျင်မှုတစ်ခုဖော်ပြရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 2011; 37: 346-58 ။
Makhubele B က,
က Parker W က
။ အန္တရာယ်များနှင့်အမြင်များ: တောင်အာဖရိကမှာနေတဲ့လူငယ်လူကြီးများအကြားလိင်ကွဲစအိုလိင်ဆက်ဆံ။ ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်: AIDS ရောဂါအတှကျအရေးစင်တာ, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အကဲဖြတ်, 2013 ။
။ အမျိုးသမီးများစအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်စူးစမ်းလေ့လာခြင်း - နာကျင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအဓိပ္ပါယ်များ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2013; 42: 1053-62 ။
Marston က C,
ကောင်းစွာ K သည်
။ အခြေခံများ။ အဆင့်များနှင့် 'သင်၏လမ်းဖွင့်ခြင်း' - လူငယ်များသည်လိင်အင်္ဂါမဟုတ်သောအလေ့အကျင့်များနှင့် 'ပုံမှန်' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများအကြောင်းပြောဆိုခြင်း။ Sociol Res အွန်လိုင်း 2013; 18: 1 ။
Corbin J ကို,
။ အရည်အသွေးသုတေသန၏အခြေခံ: နည်းစနစ်များနှင့် grounded သီအိုရီဖွံ့ဖြိုးဆဲဘို့လုပျထုံးလုပျနညျး။ 3rd edn ။ တထောင်သပိတ်, CA: SAGE, 2008 ။
။ လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပုံဖော်သောအချက်များ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 2006; 368: 1581-6 ။
Marston ကို C
။ လိင်ကွဲကျပ်ကိုင်ကဘာလဲ? မက္ကစီကိုစီးတီးရှိလူငယ်များအနေဖြင့်ဇာတ်လမ်းများပြန်ဆို။ Sociol ကျန်းမာရေး Illn 2005; 27: 68-91 ။
။ လူငယ်ပုလ်: ဆွဲဆောင်မှုအထီးလိင်ကွဲ။ br J ကို Sociol 2010; 61: 737-56 ။
ဟော်လန် J ကို,
Ramazanoglu ကို C,
ရှပ် S က,
။ ဦးခေါင်းအတွင်းအထီး: လူငယ်များ, လိင်ကွဲနှင့်အာဏာ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့: အဆိုပါ Tufnell စာနယ်ဇင်း, 1998 ။
Gill R ကို
။ Postfeminist မီဒီယာယဉ်ကျေးမှု: တစ်နည်းမနော၏ဒြပ်စင်။ EUR J ကိုသတ်ဖို့လုံး 2007; 10: 147-66 ။
။ အပျိုစင်ဘဝကိုဖျက်သိမ်းခြင်း - လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလူငယ်များ၏မှတ်တမ်းများ။ လိင်ဆက်ဆံရေး Ther 2000; 15: 221-32 ။
Whittemore R ကို,
Chase SK ကို,
။ အရည်အသွေးသုတေသနအတွက်တရားဝင်မှု။ Qual ကျန်းမာရေး Res 2001; 11: 522-37 ။
။ Abstinence သာပညာရေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှုန်းထားများ: ငါတို့သည် US မှာပြည့်စုံသောလိင်ပညာရေးလိုအပ်ဘာဖြစ်လို့။ PLoS ONE 2011; 6: e24658 ။
ကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့။ လိင်ပညာရေးအပေါ်နိုင်ငံတကာနည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှု။ ပဲရစ်: ယူနက်စကို, 2009 ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အမျိုးသားရေးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တန်ရာကိန်းလေ့လာမှု (2015) မှအခြားလိင်အပေါင်းအဖေါ်များတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်နှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းအတွေ့အကြုံနာကျင်မှု